June 21, 2020 - Khitalin Media
June 21, 2020 Khitalin Media 0
မျက်နှာကိုကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိမရှိ သိနိုင်မယ့်နည်း(၈)နည်း လူတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရုံနဲ့ သူ့အကြောင်းကို အတိအကျပြောနိုင်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာကိုဖတ်တဲ့ ပညာမျိုးဆို တာ အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ပညာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ကံကကြမ္မာကို မသတ်မှတ်နိုင်ပေမယ့် ဘာတြွေ ဖစ်လာ နိုင်သလဲဆိုတာကိုတော့ အနီးစပ်ဆုံးခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ရိုးရာရုပ်လက္ခဏာဖတ်ပညာအရ လူချမ်းသာတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ချေများတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) နှစ်ဖက်ညီညာတဲ့မျက်နှာအချိုးအစား မျက်နှာအချိုးအစားနှစ်ဖက်ညီညာနေတာမျိုးက […]
သိထားသငျ့တဲ့ အိမျတှငျး ပစ်စညျးအခြို့ရဲ့သကျတမျးကုနျဆုံးရကျမြား…
အိမ်တိုင်းမှာလုပ်လေ့ရှိတဲ့အရာတွေက ပစ္စည်းတွေကို ကြာရှည်စွာသုံးစွဲတာ၊ တစ်ခုခုပျက်စီးသွားရင်ပြန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုပြီးလွှင့်မပစ်ရက်ပဲသိမ်းထားတာတွေ၊ အသစ်မလဲပဲပစ္စည်းဟောင်းတွေကို အထပ်ထပ်သုံးစွဲနေတာမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အိမ်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့သူတွေလုပ်တတ်တဲ့အယူအဆအမှားတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မရှိဘူးထင်ပြီးပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲတာတွေရှိနေတာကြောင့်အိမ်တွင်းပစ္စည်းအချို့ရဲ့သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်နော် (၁) သွားတိုက်တံ သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးအတွက်သွားဆရာဝန်တွေကသွားတိုက်တံကို ၃ လကိုတစ်ကြိမ်လဲလှယ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ၃ လထက်ပိုပြီး ကြာအောင် သုံးစွဲတဲ့အခါသွားတိုက်တံမှာဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ၊ရောဂါပိုးတွေကပ်ညိနိုင်ခြေအများအပြားရှိနေလို့ ၃ လ ထက် ပိုကြာအောင်မသုံးသင့်ပါဘူး။ […]
နတ်ဆေး လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ထိုက်တဲ့ ကင်ဆာ အမျိုးမျိုး ပျောက်တဲ့ဆေး
နတ်ဆေး လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ထိုက်တဲ့ ကင်ဆာ အမျိုးမျိုး ပျောက်တဲ့ဆေး အဘပေးတဲ့နတ်ဆေး မောင်ကျော်သူ ရဲ့အရူးဆေး ပေါ့ အရူးဆေး ပေါ့သေးသေးမထင်နဲ့ ကင်ဆာပြောက်တဲ့ဆေးသင်္ဘော အဖိုပင် က ရှာလို့ရပါတယ်။ အသီး မအောင်လို့ လူတွေက နှုတ်ပစ်ကြလို့ပါ။ ၁ ။ ။ သင်္ဘော အဖိုပင်မှာအူသားနဲ့အမြစ် […]
သှေးကွောထုံးတာ ကို (၂) ပတျအတှငျး မုခပြောကျကငျးတဲ့ မွနျမာ့သဘာဝ တိုငျးရငျးဆေးနညျး
ဒီတစ်ခါ မိတ်ဆွေတို့ကို ပြောပြမယ့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတကတော့ သွေးကြောထုံးခြင်း၊ သွေးကြောဆုံခြင်းကို ခရမ်းချဉ်သီးဖြင့်ကုသနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးနည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးတတ်နိုင်ပြီး ဆေးရုံဆေးခန်းကို အလွယ်တကူတက်နိုင်သူတွေအတွက်တော့ ခေတ်မီဆေးကုထုံးများစွာ ရှိနေပေမယ့် ဆေးရုံနဲ့အလှမ်းဝေးသူများအတွက်တော့ ဒီသဘာဝကုထုံးဟာ တကယ်ကို အကျိုးရှိစေမှာပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာ လူသားတွေအတွက် အာဟာရအဖြစ် အကျိုးပြုပေးနိုင်ရုံမက ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုလည်း များစွာအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ အံ့ဖွယ်သဘာဝဆေးတစ်မျိုး […]
စိတ်ပြန့်လွှင့်နေသူ တစ်ဦးမှ ခြင်္သေ့ကြီးခေါင်းကိုခွပြီး ဟဲ့ခွေး ဟဲ့ခွေး လို့ အော်ကာတက်စီးနေသည့် ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ)
စိတ်ပြန့်လွှင့်နေသူ တစ်ဦးမှ ခြင်္သေ့ကြီးခေါင်းကိုခွပြီး ဟဲ့ခွေး…ဟဲ့ခွေး လို့ အော်ကာတက်စီးနေသည့် ဗီဒီယို(ရုပ်/သံ) Vedioအောက်ဆုံးတွင်ပါဝင်သည် မြဝတီမြို့ ရွှေမြင်းဝန်ဘုရား အရှေ့မုခ်မှ ခြင်္သေ့ရုပ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာ(အရူး) စိတ်ပြန့်လွှင့်နေသူ တစ်ဦးမှ ခြင်္သေ့ကြီးခေါင်းကိုခွပြီး ဟဲ့ခွေး ဟဲ့ခွေး လို့ အော်ကာတက်စီးနေသည့်အတွက် အမြင်မတော်၍ တာဝန်ရှိသူများမှချော့မော့ပြီး အောက်ကိုဆင်းခိုင်းခဲ့ရသည်ဟု ကြားသိရပါကြောင်း။ မနေ့ ကဖြစ်သည် […]
မည်းညစ်နေတဲ့ ပေါင်ခြံနဲ့ ချိုင်းကြား အသားအရေတွေကို ဖြူဖွေးသွားစေမယ့် နည်းလမ်း(၅)သွယ် ပေါင်ခြံတွေ၊ ချိုင်းကြားတွေ မည်းနေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းနေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် ငွေကုန်ကြေးကျခံစရာ မလိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ရှိပါတယ် …။ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းနဲ့ သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေပဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှာတွေ ပူစရာမလိုပါဘူးနော်။ ပုံမှန်လေး လုပ်ပေးသွားရင် သိသာထင်ရှားတဲ့ […]
ဒီလို ၃ မိနစ် ရေနွေးအိုး သုံးရင် သိထားရမှာတွေ…
ကျနော်တို့ နိုင်ငံတွင် ယခု အခါ ၃မိနစ် ရေနွေးအိုးများကို အိမ်ထောင်စုတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒီရေနွေးအိုးမှာ ၁၀၀၀ဝပ် အသုံးပြုထားသော်လည်း အပူကိုကို ရေထဲသို့ အလျှင်အမြန် စီးဝင်နိုင်အောင် တည်ဆောက်ထားလို့ အချိန်တိုအတွင်း ကိစ္စပြီးမြောက်စေတဲ့အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချွေတာရာ ရောက်သလို security အဆင့်ဆင့် ခံတည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူကို […]
ထောပတ်သီး ပုံမှန်စားပေးခြင်းကြောင့် ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါပေါများများထွက်တဲ့ ထောပတ်သီးတွေက အလှအပရေးရာအတွက်ရော၊ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပါ အကျိုးဖြစ်စေတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။ ထောပတ်သီးကို ပုံမှန်နေ့တိုင်း စားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိလို့နေပါတယ်နော်။ ကဲ ထောပတ်သီးက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနေလဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုကျန်းမာလာမယ် ထောပတ်သီး ပုံမှန်စားပေးခြင်းက ပိုမိုကျန်းမာတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာစေပါတယ်။ […]
သင့် အသက် ဘယ်လောက် လဲ? ဘာ နေ့မွေးလဲ? သာ မှန်မှန် ပြောပါ…မှန်လွန်း လို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ် တဲ့ ဇနက ဟောကိန်း
မှန်လွန်းလို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဇနက ဟောကိန်း… ဘုရားအလောင်းတော် မဟာဇနကမင်း၏ ဖြစ်စဉ် ခုနှစ်မျိုး အခြေပြု၍ ရှေးဆရာကြီးများက တီထွင်၍ တွက်ကိန်းဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အလွန်လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ယနေ့ပညာရှင်များထိ သုံးစွဲနေသော တွက်ကိန်းဖြစ်ပါသည်။ တွက်ကိန်းအား ပုံသေကားချမယူပဲ မဟာဘုတ်စသော အခြား တွက်ကိန်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဟောပြောလျှင် အလွန်အစွမ်းထက်သော […]
သုံးရကျအတှငျး ခွေ လကျတှေ ဖွူဖှေးလာစတေဲ့ သဘာဝ အိမျတှငျးဆေး…
သုံးရက်အတွင်း ခြေလက်တွေ ဖြူဖွေးလာအောင် ဆေးနည်းသစ်တခုပေးပါရစေနော် …။သုံးရက်မဟုတ်ဘဲ တစ်ရက်နဲ့ကို သင့် အသားအရေ ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ် …။ အထူးသဖြင့် နေလောင်ထားတဲ့ ခြေ၊လက် အသားအရေအတွက် ဒီနည်းက အသုံးဝင်လွန်းပါတယ်။ ပျက်ဆီးနေတဲ့ အသားအရေ ပြန်လည် ဖြူဖွေးချင်တယ် ဆိုရင် အဆင့်(၂)ဆင့် ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ် …။ […]